Azonao atao izao ny misintona ny fampiharana Adobe Photoshop Camera vaovao amin'ny Android | Famoronana an-tserasera
Hatramin'ny omaly dia nanao ny APK ny Adobe Photoshop Camera amin'ny Android. Ary amin'ny ora voalohany misy antsika amin'ny app, ny marina dia manao zavatra bebe kokoa noho ny tsara izy.
Una fampiharana natokana ho an'ny Adobe Sensei ary mikasa ny hanomboka amin'ny taona 2020 i Adobe. Izany rehetra izany fampiharana fakantsary izay miaraka amin'ny tanjona ny handray dingana lehibe amin'ny famoronana atiny multimedia avy amin'ny telefaona finday.
Fakan-tsary Adobe Photoshop dia mizara ho fizarana roa manan-danja: ny iray dia ny fakantsary miaraka amin'ny viewfinder sy ny topi-maso mialoha ny fakana azy, ary ny faharoa dia ny fanodinana sary aorian'ny sary. Ireo fitaovana roa dia mahery vaika indrindra ary noho ny sivana sy ny vokatra azontsika alaina, hahatratra vokatra mahafinaritra isika.
Manome anao ohatra vitsivitsy izahay momba ny fahaizany ary inona miaraka amina fotoana kely aminao no azonao atao. Manana isika nanandrana ny topi-maso amin'ny Samsung Galaxy Note 10+ ary ny fampisehoana dia tonga lafatra, afa-tsy amin'ireo fotoana ireo ny fakantsary fakan-tsary izay somary taraiky. Fa raha tsy izany dia tiana ilay app ary afaka milalao azy isika hizaha toetra ireo sivana ireo.
Ny vondrona sivana tsirairay avy dia mamela antsika hanao fampiroboroboana indroa, fanatsarana ny sarin-tsakafo, fanovana ny lanitra hanovana ny rahony, mandehana andro aman'alina, ny vokatry ny majika ary isan-karazany maro amin'izy ireo izay mamela valiny mahafinaritra.
Mijanona ao koa izahay ny fanatsarana mandeha ho azy izay mametraka ny famaranana ireo sary ireo izay raisinay amin'ny terminal. Ny marina dia manao asa lehibe i Adobe Sensei ary afaka jerentsika tsotra izao ny fomba amin'ny sary sakafo rehefa manalalaka ny loko miova isika mba hahagaga antsika tanteraka. Azontsika atao koa ny manokatra ireo izay ananantsika mba hanatsarana azy ireo.
Ny tsara indrindra dia betsaka ny zavatra ho avy ary hitombo isa ireo filtre ireo satria manantena fitoniana amin'ilay teo aloha izahay. Azonao atao ny misintona ny APK ary apetaho eo amin'ny farany anao, satria mijaly mafy ny mid-range sy ny ambany ity topi-maso voalohany amin'ny Adobe Photoshop Camera.
marary mitsika - Adobe Photoshop Camera APK
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Azonao atao izao ny misintona ny topi-maso ny Adobe Photoshop Camera amin'ny Android: fampiharana mahafinaritra
Tommy dia hoy izy:
Ary oviana ny adove Dreamweder no ho amin'ny Android?
Mamaly an'i Tommy
mercè ribera dia hoy izy:
"Ny topi-maso ny fakana azo" .. azonao azavao azafady ny dikan'izany? ohatran'ny hoe manana fanaraha-maso lavitra ny fakan-tsary ?? Tiako raha azonao hazavaina bebe kokoa ny fomba fiasa sy ny safidy atolotra anao.
Mamaly an'i mercè ribera
Ny vokany nofidinao dia efa ampiharina amin'ny mpijery ny fampiharana fakan-tsary. Izany hoe, ny topy mason'ilay sary ho raisinao dia vitaina tamin'ny valiny voafantina teo aloha.
Azo apetraka amin'ny takelaka Apple ve izy io? Ary raha tsy izany, inona ny fampiharana apetrakao amin'ny endrika mitovy amin'izany?
Mamaly an'i Merce
Mampianatra anao hanao sary 3D tahaka ny fanaony ity mpanakanto alemanina ity